Australia Signs Critical Minerals Research Agreement with U.S. | Myanmar Business Today
Home Business International Australia Signs Critical Minerals Research Agreement with U.S.
Australia Signs Critical Minerals Research Agreement with U.S.
Australia’s minerals agency has signedadeal with its United States counterpart to jointly developabetter understanding of both countries’ critical minerals reserves, Australia said on Tuesday.
GeoScience Australia and the United States Geological Survey (USGS) signed the agreement, which did not mention any specific funding, that will also look at better quantifying the global supply potential of critical minerals such as rare earths, Australia’s Resources Minister said inastatement.
Critical minerals areasuite of elements such as lithium, cobalt and neodymium used in high tech technologies like renewable energy, electric vehicle batteries, and defence.
U.S. and European governments are trying to broaden the supply chain of critical minerals including rare earths, which China dominates. But developers say the governments are too slow to make funds available.
The announcement comes as Australia’s Prime Minister Scott Morrison visits the United States this week, and builds on an initial agreement signedayear ago. Australian rare earths developer Northern Minerals will be part of the country’s delegation to Washington, it said inastock exchange filing on Tuesday.
The research agreement will focus on mapping potential critical mineral resources and prioritize developing big data to understand supply and demand scenarios for developing the critical minerals pipeline, the statement said.
Rare earths are highly prized because of their strong magnetic properties, crucial to industrial magnets used in some types of missiles, but the extraction process is highly complex and expensive to set up.
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် နှစ်နိုင်ငံ သတ္တုသိုက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမို နားလည်မှုတည်ဆောက်ရန်အတွက် အမေရိကန်နှင့် သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အင်္ဂါနေ့တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံက ပြောကြားလိုက်သည်။
အဆိုပါ သဘောတူစာချုပ်ကို GeoScience Australia နှင့် United States Geological Survey (USGS) တို့က ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာငွေ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍တော့ တစ်စုံတစ်ရာ ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ အဆိုပါ စာချုပ်အရ ယင်းအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအနေဖြင့် rare earth ကဲ့သို့သော အရေးကြီး ဓာတ်သတ္တုများ၏ ပမာဏကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အရေးကြီး ဓာတ်သတ္တုများတွင် ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်များ၊ လျှပ်စစ်ကားဘက်ထရီများနှင့် ကာကွယ်ရေးကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် နည်းပညာများတွင်အသုံးပြုသည့် လစ်သီယံ၊ ကိုဘော့၊ နီယိုဒိမီယံကဲ့သို့သော ဓာတ်သတ္တုများပါဝင်သည်။
အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ဥရောပ အစိုးရများမှာ တရုတ်နိုင်ငံက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသည့် rare earths အပါအဝင် အရေးကြီး ဓာတ်သတ္တုများ ရရှိနိုင်မှုကို ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ သို့သော် ယင်းစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကုမ္ပဏီများကတော့ အစိုးရများမှာ ဘဏ္ဍာငွေချထားပေးရန် နှေးကွေးနေသည်ဟု ဆိုကြသည်။
‘‘အမေရိကန်အနေနဲ့ အရေးကြီး ဓာတ်သတ္တုလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ များပြားလှတဲ့ ဓာတ်သတ္တုတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံတကာမှာ့ rare earths အပါအတွင် အဲဒီလို အရေးကြီး ဓာတ်သတ္တုတွေ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာစေပါတယ်’’ ဟု သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ သယံဇာတဝန်ကြီး Matt Canavan က ဆိုသည်။
သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် Scott Morrison အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်သွားရောက်နေစဥ်အတွင်းတွင် ယခုကဲ့သို့ ကြေညာချက်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က ရေးထိုးခဲ့သည့် ကနဦးသဘောတူညီချက်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ rare earth သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း Northern Minerals မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သုတေသန သဘောတူညီချက်မှာ အရေးကြီး ဓာတ်သတ္တများ၏ တည်နေရာရှာဖွေခြင်း၊ ယင်းဓာတ်သတ္တုများ ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် supply နှင့် demand အနေအထားများနှင့် ပတသ်က်၍ အချက်အလက် တွက်ချက်မှုများကို အလေးပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင်း သတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာငွေ မည်မျှ အသုံးပြုသွားမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာငွေများအား နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးပါသော သယံဇာတများ၊ နည်းပညာများအတွက် သုံးစွဲရန် အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံက အချို့‌သော အရေးကြီးသတ္တုတူးဖော်ရေး စီမံကိန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းမှုများလည်းရှိသည်။
SOURCEMelanie Burton (Reuters)
Previous articleGreek Economy to Grow 2.8% In 2020 On Investment, Lower Taxes, Budget Projects